Shabaggeeda mesh - Shiinaha Hebei Samsung Birta Wire mesh
Qalabka Haboon shabaggeeda ka steel carbon, aluminium, bir-macmalay, iyo Alloys gaar ah siisaa ammaan, functional, waxyaabaha raagaya xidhaan deegaan oo dhan. Faa'iidooyinka The, codsi gaar ah iyo muuqaalada iyo shabaggeeda mesh: shabaggeedii Steel bixisaa faa'iidooyinka soo socda iyadoo la adeegsanayo waraaqaha Roobka steel marka la barbar dhigo: shabaggeedii Steel leeyahay miisaanka iftiin, xoog wanaagsan, capacity weyn oo ay ku badbaadin karto qalabka iyo kharashka. Waxay bixisaa hawo wanaagsan iftiinka iyo dabaysha, dareen casriga ah, bilicsanaanta ...
Supply Kartida: 400 Ton / metrik halkii Week
shabaggeeda ka steel carbon, aluminium, bir-macmalay, iyo Alloys gaar ah siisaa ammaan, functional, waxyaabaha raagaya xidhaan deegaan oo dhan.
Faa'iidooyinka The, codsi gaar ah iyo muuqaalada iyo shabaggeeda mesh:
shabaggeedii Steel bixisaa faa'iidooyinka soo socda iyadoo la adeegsanayo waraaqaha Roobka steel marka la barbar dhigo:
shabaggeedii Steel leeyahay miisaanka iftiin, xoog wanaagsan, capacity weyn oo ay ku badbaadin karto qalabka iyo kharashka. Waxay bixisaa hawo wanaagsan iftiinka iyo dabaysha, dareen casriga ah, muuqaalka farshaxanka iyo ammaanka anti-taraarax. Waxa kale oo si fudud loo nadiifin, fududahay in la rakibo oo raagaya xidhaan isticmaalka.
Mesh iyo shabaggeeda waxyaabaha waxaa loogu talagalay oo soo saaray for dhismaha kala duwan warshadaha iyo sokeeye ee wadada magaalada, beero, yard, garoonka diyaaradaha, tareenka iyo injineernimada warshadaha, iyo waxay bixiyaan soo socda sifooyinka:
* aragti bilicsanaanta: khadadka Simple iyo shirka muuqaalka lacag arrimuhu casriga ah.
* The dheecaan ugu fiican: aagga Baxsiga ah 83.3 boqolkiiba, in ka badan laba jeer alaabta birta ah ee kabka.
* Hot-maquufin galvanized daaweynta: hantida miridhku ku-caddayn Good, bedelka dayactirka-free.
* Design Anti-xatooyada: The cover iyo jir yahay wadajirka ammaanka qurbaan faseexad, ammaanka iyo sahlanaanta furan.
* Maalgelinta Savings: Large-taako. In ka yar laga badiyay for load culus kula alaabta birta kabka marka la barbar dhigo. Kharashka waa la badbaadin karaa khatarta ah in la xado ama burburiyo hal haddii bir ah ee kabka waa isticmaalka.
* Xoog High: Xoogga iyo qalleyf ah ayaa aad uga badan bir ah ee kabka. Waxaa loo isticmaali karaa boosteejada, garoonka diyaaradaha iyo kuwa kale ee waaweyn-taako iyo xaalad loading culus.
Previous: Solayga la solay dhaliyay
Next: isagoo dhaliyay caaga